Biological Safety armaajooyinka Factory, Shirkado cusub | Shiinaha Biological Safety armaajooyinka-saareyaasha
Home » Products » Qalabka Laboratory » Biological Safety golaha wasiirada
Iyada oo rikoor track ballaaran ee badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka, armaajooyinka HFsafe LC dhigi maalgelinta ugu fiican ee tiro balaadhan oo ah codsiyada oo ay ku jiraan la waxii jeermis ah oo u baahan Heerka Biosafety 1, 2 ama 3 xasilin shaqada.
HFsafe 900/1200/1500/1800 (Gaadhi Nooca)
Bogsii armaajooyinka biosafety Force HFsafe heerka tayada, design, iyo hal-abuurka ka timaada dhaxal ka badan 25 sano waayo-aragnimo. At bogsii Force waxaan ogahay sida ay muhiim u tahay in ay bixiyaan heer sare ah ilaalinta si operator, wax soo saarka iyo deegaanka la technology sare. Iyada oo rikoor track ballaaran ee badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka, armaajooyinka HFsafe dhigi maalgelinta ugu fiican ee tiro balaadhan oo ah codsiyada ka mid ah la waxii jeermis ah oo u baahan Heerka Biosafety 1, 2 ama 3 xasilin shaqada.
HFsafe 900/1200/1500/1800 (Type Manual)
Bogsii armaajooyinka biosafety Force HFsafe heerka tayada, design, iyo hal-abuurka ka timaada dhaxal ka badan 25 sano waayo-aragnimo. Waa II Nooca Class model A2 la albaabka hawlgalka buugan, bixinta rikoor track ballaaran ee badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka.